2016 Buy ဖို့ပစ္စည်းပစ္စယ
Tech မှ Stuff
Death Wish Coffee (Strongest Coffee)
Fake Poop Soap Bars
They do say bigger is better, but we all know it’s not true…right? RIGHT??? Well, if you want to get bigger where it counts then this might be the best Penis Enlargement tool you can find. အင်္ဂါရပ်များ: EXERCISE YOUR…
Tired of overcharging your phone or tablet? Tired of wasting electricity every month? Then there is nothing better for you than this Auto Safety Shutoff Outlet! အင်္ဂါရပ်များ: Easy to set with one simple touch No dials to mess…
Chocolate fondue at home, is there anything better for chocolate lovers? With this Chocolate Fondue Maker you can indulge in chocolate everyday! အင်္ဂါရပ်များ: Chocolate fondue maker features melting and warming setting to perfectly melt your chocolate Serving…
Want to smoke the very best, like no one ever could? Well, to smoke them all and to your highest potential, this Pokemon Poke-ball grinder will help achieve that goal. အင်္ဂါရပ်များ: Pokemon Poke-ball Grinder 40mm (1.5″) …
Are you tired of being nervous? Want to relieve your stress without having to chew your nails or pull out your hair? Then the Fidget Cube is perfect for you. အင်္ဂါရပ်များ: Material:High Quality Plastic An unusually addicting, high-quality…
အဆိုပါ jamstik + (www.jamstik.com) စစ်မှန်သော strings နဲ့ကိုမှန်ကန်စိတ်မပူနှင့်အတူဒစ်ဂျစ်တယ် SmartGuitar ဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာတကယ့်လျှပ်စစ်ဂစ်တာ၏လည်ပင်းပြီးနောက်ဂီတပညာရှင်များအားဖြင့်လုပ်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်. It connects wirelessly to iPad® iPhone® Android and Mac® and works with…
Razer Mambae ဂိမ်းမောက်ပြောင်းခြင်းအရောင်
ထိုခရစ်စမတ်သစ်ပင်ကဲ့သို့သင်၏အခန်းတက်မီးနေစဉ်ရုံလိုလားသူရဲ့တူဂိမ်း Want? Well there is no better way to go then with the Razer Wireless Mamba Gaming Mouse. The world’s most precise gaming mouse sensor…
clutch Chairz အခိုးအငှေ့ညှိရာကိရိယာစီးရီးဂိမ်းသဘာပတိ
clutch Chairz အဆုံးစွန်ဂိမ်းကုလားထိုင်နှင့်ခေတ်သစ်ရုံးကုလားထိုင်ဖြစ်ပါသည်. သင်သည်သင်၏ကုလားထိုင်အဆင့်မြှင့်တင်ချင်တယ်ဆိုရင်သင်တစ်ဦး clutch သဘာပတိရ! Ergonomics ဒီဇိုင်း – ကျားကန်နှစ်ဖက်, အဆမတန်ကြီးမား lumbar support ကို & 4D armrests Heavy duty aluminium base…
နှိုးဆျော & မုန့်ဖုတ်ကော်ဖီခွက်
အဘယ်သူသည်ဂန္ဝိတ်မချစ်ပါဘူး & ဖုတ်ကင်? သငျသညျနိုးချင်တယ်ဆိုရင် & Bake properly then you must purchase this Wake & Bake Mug. သင့်ရဲ့နံနက်အရေးအပါဆုံးဖလားနှင့်အတူချွတ်မှန် Start. Durable Ceramic Dishwasher Safe Microwave…
မူလစာမျက်နှာမှာဆူရှီ Make မှ Yomo ဆူရှီသည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကို
သငျသညျအစဉျအမွဲအိမ်မှာဆူရှီလုပ်ချင်တယ်ဖူးသျောလညျးသငျစနစ်တကျသင့်ရဲ့ဆူရှီသင်အကြိုက်ဆုံးစားသောက်ဆိုင်တတ်လမ်းကိုလှိမ့်နိုင်ခဲ့ကြပြီမဟုတ်ကြောင့်ခက်ခဲအချိန်အဲဒီလိုလုပ်ခြင်းအားခဲ့ကြ? With the Yomo Sushi Maker you will never…